आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२५ भदौ २०७६ बुधबार, ११ सेप्टेम्बर २०१९)
श्रीशाके १९४१ नेपाल सं. ११३९ वर्षा ऋतु परिधावी नामक सम्वत्सर वि.सं. २०७६ भाद्र २५ गते बुधबार तद्अनुसार सन् २०१९ सेप्टेम्बर ११ तारिख भाद्र शुक्लपक्ष त्रयोदशी तिथि श्रवण नक्षत्र अतिगण्ड योग कौलव करण आनन्दादिमा छत्र योग चन्द्रमा मकर राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय विहान ५ः४७ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १८ः१२ मा हुनेछ । प्रदोष व्रत ।
मेष राशि – ग्रहगोचर शुभ फलदायक छ । आयस्रोत बढ्ला । भागदौड लागि रहनेछ । कुनै प्रकारको शारीरिक र आर्थिक कार्यमा अनुकूलता रहला । अरुको भर नपर्दा उचित हुनेछ । लगानी उठ्ला । कार्यव्यपारमा सफलता मिल्नेछ । यात्रासित सम्बन्धित काममा सफलता मिल्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । पारिवारिक सुख समृद्धि हासिल हुनेछ ।
वृश्चिक राशि – हांसविलासमा रुचि बढ्ला । कठोर परिश्रमले मनोकूलको काम बन्नेछ । वार्तामा सफलता पाउनुहुनेछ । धन सम्पत्ति बढ्नेछ तर अत्यन्तै बढी प्रयास र प्रयत्नले । विवादमा पर्नु र अरुको भरमा बस्नु उचित हुनेछैन । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ला । आशा उत्साह बढ्नेछ ।
मकर राशि – अन्नधन बढ्नेछ । सुख आनन्द बढ्ला । आयस्रोत बढ्ला । रोकिएको धन प्राप्त होला । दूर देशबाट शुभ समाचार प्राप्त होला । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । मान सम्मान बढ्नेछ । पारिवारिक सुखशान्ति बढ्नेछ ।